Edere site Tranquillus | Mar 28, 2020 | Iji dozie ma rụọ ọrụ na France
N'ihi ọrịa coronavirus, onye were gị n'ọrụ kpebiri ịrụ ọrụ nwa oge. Na ngwụcha, a na-ekwu na usoro ihe a ga-emetụta ihe karịrị nde ndị ọrụ abụọ. Kedu ihe bụ enweghị ọrụ ọrụ, kedụ ihe ị ga - eme, onye na ole ị na - aga kwụọ gị ụgwọ ? Azịza niile nke ajụjụ gị.
Gịnị bụ enweghị ọrụ ma ọ bụ enweghị ọrụ aka?
Iji kwuo banyere enweghị ọrụ ma ọ bụ ọrụ aka ọrụ, a na-eji okwu ahụ ele mmadụ anya n'ihu taa. Dịka iwu n'ozuzu, nke a bụ maka ụlọ ọrụ na-eche ihu ndagide ma ọ bụ nkwụsị dị ukwuu na ọrụ ya. Paykwụghachi ndị ọrụ ya ụgwọ nke steeti ga-akwụghachi ya. Nke a na - enyere aka izere ịsa mmiri.
Ọ bụ n'ime usoro a, na nke a, ihe ọ bụla ụlọ ọrụ ọkachamara gị, na a ga-akwụ gị ụgwọ ruo:
84% nke ụgwọ ọnwa gị na 70% nke ezigbo ụgwọ gị.
100% nke ụgwọ gị ma ọ bụrụ na ị nwere ụgwọ opekempe ma ọ bụ ọzụzụ (CDD ma ọ bụ CDI).
Jiri euro 4607,82 kachasị ma ọ bụrụ na ị gafee ọnụ ụzọ 4,5 SMIC.
Nke a dị na onye were gi n’ọrụ mee arịrịọ na Regional Directorate maka Enterprises, Asọmpi, Oriri, Ọrụ na Employment. Iji nyere ndị azụmaahịa aka n'oge a, enyere ha ụbọchị 30 ka ha were rịọ arịrịọ ha. Dị ka ị si chọọ, ị ga-enweta ụgwọ ọnwa gị na ụgwọ gị n’ụdị a na-emebu. N'ime oge enweghị ọrụ a, a ga-akwụsị ọrụ nkwekọrịta gị, mana anaghị akwụsị. Nke ahụ bụ ịsị na ị ga-anọnyere ụlọ ọrụ gị, yana ewepụtara ya ka ị rụọ ọrụ maka onye asọmpi dịka ọmụmaatụ. Ọtụtụ nkwekọrịta ọrụ nwere nkebi ahịrịokwu a na-abụghị asọmpi. A machibidoro gị ịrụ ọrụ, mana ị ga-agwarịrị onye were gị n'ọrụ.
Anyị enwere ike igbochi gị ịrịọ maka akwụkwọ?
N'oge mkpọchi na ịgbaso nkwekọrịta ụlọ ọrụ na ndị otu na nzukọ nke Kọmitii Social na Akụ na ụba. Azụmaahịa gị nwere ike ịmanye gị Bọchị 6 kwụsịrị ugwo kacha. Oge ngosi, nke na-abụkarị otu ọnwa, ka ahapụpụrụ n'ọnọdụ ndị ahụkebe nke France na-aga. RTT ga-esokwa otu arụmụka ahụ.
Y’oburu n’icho iga njem ezumike n’oge. Nwere ike ịtụ anya iyigharị ọrụ gị. Mara na ọ dịghị ihe na-amanye onye isi gị ịgbanwe ụbọchị ezumike gị. Kama nke ahụ, ọ nwere ike ịchọ gị ozigbo nsogbu ahụ ga-enwe ike ijide oge ezumike gị.
-Rụ ọrụ onwe gị, ndị ọrụ na-arụ ọrụ nwa oge na ndị ọrụ ụlọ.
Maka ndị ọrụ nke onwe ha, a na-ezube ịmepụta ego nke ịdị n'otu. Usoro a na-akwụ ụgwọ maka enyemaka nke euro 1500 kwa ọnwa. Ndị nwere mgbanwe ma ọ bụ kwụsị ọrụ niile nwere ike irite uru na nke a.
Ndị ọrụ ndị ọrụ nwa oge na-erite uru site na enweghị ọrụ nke onwe dị ka ndị ọrụ na-akwụ ụgwọ oge ma ọ bụ nke nwere oge. Ọdịdị nke nkwekọrịta ha anaghị emetụta ikike ha nwere irite uru na sistemụ.
Ọ bụrụ na ndị were gị n'ọrụ, ndị nne na nna, onye na-elekọta ụlọ ma ọ bụ ndị ọzọ. Ngwaọrụ yiri nke enweghị ọrụ ga - enyere gị aka inweta 80% nke ịkwụ ụgwọ gị. Onye were gị n’ọrụ ga-akwụ gị ụgwọ ma steeti ga-akwụghachi ya ma emechaa.
A ga-akwụ gị ụgwọ Coronavirus na ele mmadụ anya n'ihu, 84% nke ụgwọ ọnwa gị. Mee 12th, 2020Tranquillus
gara agaKedu onye ga-erite uru site na nkwụsị ọrụ metụtara mmechi ụlọ akwụkwọ? Ọ bụrụ n ’ịnwere ike inweta ya, kedu ego ya na oge ịkwụ ụgwọ ya?
-esonụMụta inwe obi uto na SKILLEOS, ikpo okwu e-mmụta